144,000 तिनीहरूको बुबाको नामको साथ छाप लगाइयो - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे १९, २०२२ मे २, २०१९ द्वारा प्रकाशक
"अनि मैले हेरें, र, हेर, एक थुमा सियोन डाँडामा उभिएको छ, र उहाँसँग एक लाख ४४ हजार, उहाँका पिताको नाम तिनीहरूको निधारमा लेखिएको छ।" ~ प्रकाश १४:१
प्रकाश अध्याय 13 मा जनावरहरू र जनावरहरूद्वारा चिन्ह लगाइएकाहरूका बारेमा ठीक विपरीत: अध्याय 14 मा यी जनावरहरूद्वारा चिन्हित छैनन्। तर तिनीहरूको निधारमा थुमाको (येशू ख्रीष्ट) पिताको नामले छाप लगाइएको छ।
यी 144,000 लाई पहिले नै सिल गरिएको छ, र प्रकाश को अध्याय7मा हामीलाई फिर्ता पहिचान।
“अनि मैले जीवित परमेश्वरको छाप लिएर पूर्वबाट अर्को स्वर्गदूत उक्लिरहेको देखें: र उहाँले पृथ्वी र समुद्रलाई चोट पुर्याउन दिइएको चार स्वर्गदूतहरूलाई चर्को स्वरमा यसो भन्दै कराउनुभयो, पृथ्वीलाई हानी नगर्नुहोस्। , न त समुद्र, न रूखहरू, जबसम्म हामीले हाम्रा परमेश्वरका सेवकहरूलाई तिनीहरूको निधारमा छाप लगाएका छैनौं। अनि मैले छाप लगाइएकाहरूको संख्या सुनें: र त्यहाँ इजरायलका सन्तानका सबै कुलहरूमध्ये एक लाख ४४ हजारलाई छाप लगाइयो।" ~ प्रकाश ७:२-४
आफ्नो बुबाको नामको छाप लगाइएका १,४४,००० को हुन्?
यी 144,000 उद्धार गरिएका र सफा गरिएकाहरूका भाग थिए, र प्रकाश7मा परमेश्वर र थुमाको उपस्थितिमा थिए।
“अनि एल्डरहरू मध्ये एकले जवाफ दिए, मलाई भने, सेतो लुगामा सजिएका यी के हुन्? अनि तिनीहरू कहाँबाट आए? अनि मैले उसलाई भनें, सर, तपाईलाई थाहा छ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी तिनीहरू हुन् जो ठूलो सङ्कष्टबाट बाहिर आएका छन्, र आफ्नो लुगा धोएर थुमाको रगतमा सेता बनाएका छन्। यसकारण तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामु छन्, र उहाँको मन्दिरमा दिनरात उहाँको सेवा गर्छन्, र जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ तिनीहरूका बीचमा बस्नुहुनेछ। तिनीहरू फेरि भोकाउने छैनन्, न तिर्खा हुनेछन्। तिनीहरूमाथि न सूर्यको प्रकाश हुनेछ, न त कुनै ताप। किनभने सिंहासनको बीचमा रहेको थुमाले तिनीहरूलाई खुवाउनेछ, र तिनीहरूलाई जीवित पानीका फोहोराहरूमा लैजानुहुनेछ: र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।” ~ प्रकाश ७:१३-१७
येशु ख्रीष्टको लागि साक्षीहरूको यो शक्तिशाली बादलले "क्रिस्चियनिटी" को पशु स्वरूपको पूजा गर्दैन, तर तिनीहरूले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्छन्।
"अनि मैले स्वर्गबाट एउटा आवाज सुनें, धेरै पानीको आवाज, र ठूलो गर्जनको आवाज जस्तै: र मैले वीणाहरू बजाउने वीणाहरूको आवाज सुनें: र तिनीहरूले सिंहासनको अगाडि एउटा नयाँ गीत गाएझैं, र चार जनावरहरू (यी जनावरहरूले "जीवित प्राणीहरू" लाई राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन्) र एल्डरहरू अघि: र पृथ्वीबाट उद्धार गरिएका एक लाख ४४ हजार बाहेक अरू कसैले त्यो गीत सिक्न सकेन। ~ प्रकाश १४:२-३
144,000 लाई मात्र थाहा भएको गीत के हो?
यो परमेश्वरका उद्धार गरिएका सन्तानहरूको स्वर्गीय कोरस हो। थुमाको रगतले मुक्ति पाएकाहरू। त्यसोभए त्यहाँ यो भिन्नता छ कि तपाईंले "पापबाट मुक्ति" को गीत जान्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईं आफैंले आफ्ना पापहरूबाट मुक्त हुनुहुन्न। यो एक आध्यात्मिक गीत हो जसले परमेश्वरको पवित्र आत्मा पाएका छन् र पवित्र जीवन बिताइरहेका छन्।
परमेश्वरका साँचो मुक्ति पाएका मानिसहरूको चरित्रको बारेमा यो सत्यलाई स्पष्ट रूपमा जोड दिइएको छ, त्यसैले उहाँका मानिसहरूको लागि परमेश्वरको अपेक्षाको बारेमा कोही पनि भ्रमित हुनुपर्दैन! तिनीहरू आत्मिक वेश्या भावना ("बेबिलोन" को रूपमा चिनिन्छ) बाट मुक्त र स्पष्ट हुन आवश्यक छ। एउटै आत्मा जसले मानिसहरूलाई शैतान र उसको प्रलोभनहरूसँग इश्कबाजी गर्न अनुमति दिन्छ, र अझै पनि आफूलाई क्रिश्चियन बोलाउँछ। छाप लगाइएकाहरू साँचो आध्यात्मिक कुमारीहरू हुन आवश्यक छ।
“यी ती हुन् जो नारीहरूसित अपवित्र भएका थिएनन्। किनभने तिनीहरू कुमारी हुन्। थुमा जहाँ गए पनि उहाँलाई पछ्याउनेहरू यिनीहरू हुन्। तिनीहरू परमेश्वर र थुमाको लागि पहिलो फल भएका कारण मानिसहरूबाट छुटकारा पाएका थिए। र तिनीहरूको मुखमा कुनै छल फेला परेन, किनकि तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामु निर्दोष छन्।” ~ प्रकाश १४:४-५
अर्को यो देखाइएको छ कि आज परमेश्वरले झूटा ईसाई धर्म (आध्यात्मिक वेश्या नेतृत्वको विरुद्धमा, वा "बेबिलोन") विरुद्ध सत्य प्रचार गर्न सेवकाई बोलाउनुभएको छ।
“अनि मैले अर्को स्वर्गदूतलाई स्वर्गको बिचमा उडिरहेको देखें, जससँग पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई, र हरेक राष्ट्र, नातागोता, भाषा र मानिसहरूलाई प्रचार गर्नको लागि अनन्त सुसमाचार छ, चर्को स्वरमा, परमेश्वरसँग डराऊ। र उहाँलाई महिमा दिनुहोस्। किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ: र स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका झरनाहरू बनाउनुहुनेलाई दण्डवत् गर।” ~ प्रकाश १४:६-७
यसले झूटोको बिरूद्ध प्रचार गर्ने यो भविष्यसूचक न्याय पूरा गर्न साँचो सेवकाईको आह्वानलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रकाश अध्याय 10 मा स्पष्ट रूपमा फिर्ता पहिचान गरिएको कल।
"अनि मैले स्वर्गबाट सुनेको आवाजले मलाई फेरि बोल्यो, र भन्यो, जानुहोस् र समुद्र र पृथ्वीमा उभिने स्वर्गदूतको हातमा खुला भएको सानो पुस्तक लिनुहोस्। अनि म स्वर्गदूतकहाँ गएँ, र उसलाई भने, मलाई सानो पुस्तक दिनुहोस्। तब उसले मलाई भन्यो, “लाऊ र खाऊ। र यसले तिम्रो पेट तितो बनाउनेछ, तर तिम्रो मुखमा मह जस्तै मीठो हुनेछ। मैले स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो पुस्तक लिएँ र खाएँ। त्यो मेरो मुखमा मह जस्तै मीठो थियो। मैले त्यो खाएपछि मेरो पेट तितो भयो। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईंले धेरै मानिसहरू, राष्ट्रहरू, भाषाहरू र राजाहरूका सामु फेरि अगमवाणी गर्नु पर्छ।” ~ प्रकाश १०:८-११
र यसैले, प्रकाश 14 मा यसले हामीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि आध्यात्मिक बेबिलोनलाई उजागर गर्ने र उनको अवस्थाको न्याय गर्ने समय आएको छ।
यस बेबिलोन आत्माले पृथ्वीमा सबैलाई असर गरेको छ! र यो स्पष्ट छ कि यो आत्माले सांसारिक जनावर आत्माहरु संग हात मा काम गर्दछ। तर जसरी बेबिलोनको आत्माले पशुद्वारा चिन्ह लगाइएका सबैलाई आफ्नो कपटको दाखमद्य पिउन लगाएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले अब त्यस जनावरको चिन्हको विरुद्धमा उहाँको न्यायको क्रोध पिउनको लागि चिन्ह लगाइएकाहरूलाई बनाउनुहुनेछ।
“अनि तेस्रो स्वर्गदूतले ठूलो स्वरमा उनीहरूलाई पछ्याउँदै यसो भने, “यदि कुनै मानिसले पशु र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्छ र आफ्नो निधारमा वा हातमा आफ्नो छाप लिन्छ भने, त्यसले परमेश्वरको क्रोधको दाखरस पिउनेछ। जुन उहाँको क्रोधको कचौरामा मिसाइएको बिना खन्याइन्छ। र उहाँलाई पवित्र स्वर्गदूतहरूको उपस्थितिमा, र थुमाको उपस्थितिमा आगो र गन्धकले पीडा दिइनेछ: र तिनीहरूको यातनाको धुवाँ सदासर्वदाको लागि माथि उठ्छ: र तिनीहरूसँग दिन र रात छैन, जसले पूजा गर्छन्। पशु र उसको प्रतिमा, र जसले उसको नामको चिन्ह प्राप्त गर्दछ।" ~ प्रकाश १४:९-११
चेतावनी स्पष्ट छ, यदि तपाईले आफ्नो स्वार्थी शारीरिकताको लागि लडाइरहनुभयो भने तपाईले कहिल्यै आराम र शान्ति पाउनुहुनेछैन। र यदि तपाईं क्रिस्चियन भएको दाबी गर्दै शारीरिक जीवन बिताइरहनुभएको छ भने यसले यसलाई नराम्रो बनाउँछ! जसरी परमेश्वरले तपाईमा यो छाप पर्दाफास गर्नको लागि एक साँचो सेवकाई पठाउनुहुन्छ, तपाईलाई पनि यही प्रकाशले सताउनुहुनेछ! यस पीडाबाट आफूलाई मुक्त गर्न तपाईंले पश्चात्ताप गर्नुपर्छ र झूटा ईसाई धर्म त्याग्नु पर्छ।
"यहाँ सन्तहरूको धैर्यता छ: यहाँ तिनीहरू छन् जसले परमेश्वरका आज्ञाहरू र येशूको विश्वासलाई पालन गर्छन्।" ~ प्रकाश १४:१२
मुक्ति पाएकाहरूको "धैर्य यहाँ छ" भनेर किन उल्लेख गर्ने? किनकि जब जनावरले चिन्ह लगाएकाहरू पर्दाफास हुन्छन्, तिनीहरू धेरै क्रोधित हुन्छन्, र प्रायः तिनीहरूले उद्धार पाएकाहरूमाथि आफ्नो क्रोध निकाल्छन्। र धेरै पटक यो क्रोध सन्तहरूको सतावट र हत्यामा परिणत हुन्छ।
तर सत्यको लागि मारिएकाहरूलाई प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुले धेरै आशिष् दिनुभएको छ!
"अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भन्दै एउटा आवाज सुनेँ, लेख्नुहोस्, अबदेखि प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्: हो, आत्माले भन्नुहुन्छ, कि उनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट विश्राम लिन सक्छन्; र तिनीहरूका कामहरूले तिनीहरूलाई पछ्याउँछन्।” ~ प्रकाश १४:१३
अब यी "प्रभुमा मर्ने" लाई पनि आत्मिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा, तिनीहरू आफ्नै लागि मरेका छन्: तिनीहरू अब आफ्नो लागि बाँचिरहेका छैनन्। यसले प्रभुको विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि पापमा मरेकाहरूलाई पनि पहिचान गर्दछ: ख्रीष्ट येशूमा पवित्र गरिएको पवित्र जीवन। तिनीहरू आफ्नै काम गर्नबाट आराम गर्छन्। पृथ्वीमा भौतिक रूपमा बाँच्दा पनि ईश्वरका कामहरूले उनीहरूलाई पछ्याउँछन्।
“त्यसैले हामी डराउछौं, नत्रता, उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने वाचा छोडिनेछ, तपाईंहरू मध्ये कोही पनि त्यसबाट चुकेको जस्तो देखिन्छ। किनकि हामीलाई सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, साथै उनीहरूलाई पनि, तर प्रचार गरिएको वचनले उनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याएन, जसले सुनेका उनीहरूमा विश्वाससँग मिसिएन। किनकि हामीले विश्‍वास गर्नेहरू विश्राममा प्रवेश गर्छौं, जसरी उहाँले भन्‍नुभयो, जसरी मैले मेरो क्रोधमा शपथ खाएको छु, यदि तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछन्: यद्यपि कामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै समाप्त भइसकेका थिए। किनभने उहाँले सातौं दिनको एक निश्चित ठाउँमा यो बुद्धिमानीमा बोल्नुभयो, र परमेश्वरले आफ्ना सबै कामहरूबाट सातौं दिन विश्राम गर्नुभयो। अनि यस ठाउँमा फेरि, यदि तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसकारण यो देख्न बाँकी छ कि कोही-कोही त्यहाँ पस्नुपर्छ, र जसलाई यो पहिलो प्रचार गरिएको थियो अविश्वासको कारणले प्रवेश गरेनन्: फेरि, उसले एक निश्चित दिनलाई सीमित गर्छ, डेभिडमा भन्यो, आज, यति लामो समय पछि; जसरी भनिएको छ, आज यदि तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्‍नेछौ भने, आफ्नो हृदयलाई कठोर नगर। किनकि यदि येशू (वास्तवमा पुरानो नियमका यहोशुआको अर्थ हो) उनीहरूलाई विश्राम दिनुभएको थियो भने, त्यसपछि उहाँले अर्को दिनको कुरा गर्नुहुने थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूलाई विश्राम गर्न बाँकी छ। किनकि जो उहाँको विश्राममा प्रवेश गरेको छ, उसले पनि आफ्ना कामहरूबाट रोकेको छ, जसरी परमेश्वरले उहाँबाट गर्नु भयो। त्यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्न परिश्रम गरौं, नत्रता कोही पनि अविश्वासको एउटै उदाहरणको पछि लाग्न नपरोस्। ~ हिब्रू ४:१-११
यो कुनै पनि पाप गर्नबाट विश्राम हो (पापमा मरेको) ताकि हामीले साँचो धार्मिकताका कामहरू गर्न सकौं, जुन पवित्रता हो।
“त्यसै गरी तिमीहरू आफैलाई पनि पापको निम्ति साँच्चै मरेको ठान, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्‍वरको निम्‍ति जिउँदो ठान। यसकारण पापलाई आफ्नो नश्वर शरीरमा राज्य गर्न नदिनुहोस्, कि तिमीहरूले यसको अभिलाषाहरूमा पालन गर्नुपर्छ। न त तिमीहरूले आफ्ना अङ्गहरूलाई अधर्मका औजारहरूका रूपमा पापको हातमा सुम्पनू, तर मरेकाहरूबाट जीवित भएकाहरूझैँ र आफ्ना अङ्गहरूलाई परमेश्वरसामु धार्मिकताको साधनको रूपमा सुम्पिदेऊ।” ~ रोमी ६:११-१३
र अर्को प्रकाश 14 मा हामी उपासकहरूमा काम गर्ने साँचो पवित्रताको परिणाम देख्छौं: नयाँ आत्माहरूको फसल बचाइएको।
“अनि मैले हेरें, र एउटा सेतो बादल हेरें, र बादलमा मानिसको पुत्रजस्तै एक जना मानिसको शिरमा सुनको मुकुट र हातमा धारिलो हँसिया लिएर बसेको थियो। अनि अर्को स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर निस्के, जो बादलमा बसेको मानिसलाई चर्को स्वरमा कराउँदै आयो, “तिम्रो हँसियामा हानेर कटनी गर। किनकि तिम्रो कटनी गर्ने समय आएको छ। किनकि पृथ्वीको फसल पाकेको छ। अनि बादलमा बस्ने मानिसले आफ्नो हँसियाले पृथ्वीमा हाने। र पृथ्वी कटनी भयो।" ~ प्रकाश १४:१४-१६
के प्रकाश १४ को दुई फसलहरूद्वारा सबैजना भेला हुनेछन्?
यी अन्तिम दिनहरूमा जम्मा भएका मानिसहरूको दुईवटा अन्तिम फसलहरू छन्:
परमेश्वरबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि साँच्चै बचाइएको मध्ये एक
अर्को पाखण्डी र विद्रोही, परमेश्वरको क्रोध प्राप्त गर्न
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हामीलाई उहाँको दिनमा चेताउनी दिएका थिए कि असल र नराम्रोलाई अलग राख्नु पवित्र आत्माको निर्देशनमा हुनेछ।
"साँच्चै म तिमीहरूलाई पश्चात्ताप गर्नको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु: तर मपछि आउने उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता बोक्ने म योग्य छैन: उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ: जसको हातमा पंखा छ, र उसले आफ्नो भुइँलाई राम्ररी सफा गर्नेछ, र आफ्नो गहुँ गार्नरमा जम्मा गर्नेछ। तर उसले भुसलाई निभाउन नसकिने आगोमा जलाउनेछ।” ~ मत्ती ३:११-१२
येशूले हामीलाई भन्नुभयो कि यो अन्तमा हुनेछ। उहाँले "सामा" भन्नुभएको झूटा ईसाईहरू साँचो बीचमा छर्नेछन्। र एक दिन आउनेछ जब तिनीहरू बाहिर जम्मा हुनेछन्।
“अर्को दृष्‍टान्‍त उहाँले तिनीहरूसामु यसो भन्‍नुभयो, “स्‍वर्गको राज्‍यलाई आफ्‍नो खेतमा असल बीउ छर्ने मानिससँग तुलना गरिएको छ: तर मानिसहरू सुतेको बेला, त्‍यसको शत्रु आयो र गहुँमा सामा छर्‍यो, र आफ्‍नो बाटो लाग्‍यो। तर जब फलफूल पलायो, र फल फल्यो, तब सामा पनि देखा पर्यो। तब घरधनीका नोकरहरू आए र उहाँलाई भने, “महाशय, तपाईंले आफ्नो खेतमा असल बीउ छर्नुभएको होइन? त्यो सामा कहाँबाट झरेको हो? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “यो एउटा शत्रुले गरेको हो। नोकरहरूले उहाँलाई भने, “त्यसो भए के हामी गएर तिनीहरूलाई जम्मा गरौं? तर उसले भन्यो, होइन; नत्रता तिमीहरूले सामा बटुल्दा गहुँ पनि उखेल्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवै सँगै बढ्न दिनुहोस्: र फसल काट्ने समयमा म कटनीहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा बटुल, र तिनीहरूलाई जलाउनको लागि पोथीमा बाँध, तर गहुँ मेरो गोदाममा जम्मा गर।” ~ मत्ती १३:२४-३०
येशूले पछि यो दृष्टान्त स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुभयो:
उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “असल बीउ छर्ने मानिसको पुत्र हो। क्षेत्र संसार हो; असल बीउहरू राज्यका सन्तान हुन्। तर सामा दुष्टका सन्तान हुन्। तिनीहरूलाई छर्ने शत्रु शैतान हो; फसल संसारको अन्त्य हो; र कटनी गर्नेहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। जसरी सामाहरू बटुलेर आगोमा जलाइन्छ। यस संसारको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। मानिसको पुत्रले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनेछ, र तिनीहरूले उहाँको राज्यबाट अपमान गर्ने सबै चीजहरू र अधर्म गर्नेहरूलाई भेला गर्नेछन्। र तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछ: त्यहाँ विलाप र दाँत किटाइनेछ। तब धर्मीहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्यझैं चम्कनेछन्। जसको सुन्‍ने कान छ, त्‍यसले सुनून्।” ~ मत्ती १३:३७-४३
त्यसोभए हामीसँग कस्तो प्रकारको कान छ? के हामी साँचो पापरहित पवित्रता चाहनेहरूसँग एउटै शरीरमा जम्मा भइरहेका छौं? वा के हामी तपाईलाई पापको बन्धनमा राख्ने, र झूटा सिद्धान्त र झूटो आशाको साथ चिन्ह लगाउने मानिसहरूका धर्महरू जस्तै जनावरमा भेला भएका छौं?
अर्को पोस्टमा म "भगवानको क्रोधको दाखमद्य" को बारेमा कुरा गर्नेछु जुन जनावरले चिन्ह लगाइएकाहरूलाई पर्खिरहेको छ।
कोटीहरू जनावर, प्रकाश १४, विश्वासी र सत्य, सताइयो ट्यागहरू मेलमिलाप, निधार, पवित्र, पवित्र आत्मा, सिल गरिएको, साँचो पूजा पोस्ट नेभिगेसन